Kulan dhaqaale loogu aruurinayay dadka abaartu saameysay oo lagu qabtay Finland | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kulan dhaqaale loogu aruurinayay dadka abaartu saameysay oo lagu qabtay Finland
Kulan dhaqaale loogu aruurinayay dadka abaartu saameysay oo lagu qabtay Finland
Kulankaan oo ahaa mid dhaqaale loogu u ruurinayay abaarha ka jira Soomaaliya, waxaa soo qaban qaabiyay dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Finland, waxaana ka soo qeybgalay qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi, Ururro iyo dadkale oo samafalayaal reer Finland.
Goobta kulanka taakuleynta abaaraha ay ka socotay waxaa lagu soo bandhigay iibinta cuntooyin fudfudud, Buugaag, dharka Habluhu xirtaan, cilaan saar iyo alaabo kale, waxaana dhammaan xeelahadaan cusub ee dhaqaalo u ruurinta daqligii ka soo baxa uu qeyb ka noqonayaa barnaamijka gargaarka abaraha Soomaaliya.
Qaar ka mid ah dhaqaatiirta iyo dadkii kale ee isku howlay inay dhaqaale u aruuriyaan abaarta ka jirta Soomaaliya oo la hadlay Telefishinka Qaranka ayaa sheegay in cuntooyinka iyo waxyaabaha kale ay yihiin kuwa loogu talagalay in lacagta ka soo xarooto loogu deeqo dadka ay abaartu ku heyso Soomaaliya, iyagoo Jaaliyadda Soomaaliyeed ka codsaday inay xoojiyaan dadaallada ay ugu gurmanayaan Walaalood ku dhibaateysan gudaha dalka.
Waa markii ugu horeysay oo kulan nuucaan oo kala ah ay isugu yimaadaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee dalka Finland ka howlgala iyo arday barata cilmiga caafimaadka, waxayna tusaale wanaagsan u noqonayaan Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa.
Previous articleQaban qaabada shirka Dowladda federaalka iyo maamul Goboleedyada Dalka oo laga dareemaya Muqdisho
Next articleQoysas ku xoolo beelay abaarta oo codsaday in gurmad lala soo gaaro